OnePlus3နှင့် 3T သည် Android Oreo သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည် Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
ဒီရက်သတ္တပတ်များ OnePlus သည်၎င်း၏ high-end အသစ်ဖြစ်သော OnePlus 5T ကိုတင်ဆက်ရန်ခေါင်းစဉ်များစွာကိုရယူထားသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခု တင်ပြပြီးပါပြီ ယခုအပတ်နှင့်ကုမ္ပဏီအားများစွာပျော်ရွှင်မှုများဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဟုကတိပြုသည်။ သို့သော်ဤကိရိယာသည်ခေါင်းစီးများများစွာပြုလုပ်ထားသော်လည်းဂရုပြုရန်အခြားဖုန်းများမရှိဟုမဆိုလိုပါ။ အဖြစ် OnePlus3နှင့် 3T.
တစ်ပတ်အကြာကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ဘာဖုန်းတွေလဲ သူတို့သည် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သွားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် OnePlus3နှင့် 3T တို့ပါဝင်သည်။ သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကြီးမားတဲ့ update ကိုလက်ခံရရှိမည့်ဖုန်းနှစ်လုံး။ ဤပုံစံနှစ်မျိုးအနက်မှအသုံးပြုသူများအတွက်သတင်းကောင်းရှိသည်။ Android ဖုန်းများအတွက် Android Oreo ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သည်။
OnePlus သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောဖုန်းနှစ်လုံးအတွက်တရားဝင် OTA ကိုအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သည် သူတို့သည်နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ တရားဝင်နှင့် beta သို့မဟုတ်အခြားဖော်မြူလာမပါဘဲ။ သူတို့ကတိုက်ရိုက်လွှတ် တည်ငြိမ်သော ROM ဗားရှင်း၊ ခေါ်ဆိုခ OxygenOS 5.0 ။ ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေရှိထားသူတွေအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုပါ။
ဤတရားဝင် OTA ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြန့်ကျက်သွားမည်။ ထို့ကြောင့်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိသုံးစွဲသူများကိုပိုမိုရောက်ရှိလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်မှာတရုတ်ဖြစ်သည်အာရှနိုင်ငံတွင်ကတည်းက HydrogenOS အောက်တွင်အုပ်ချုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်စျေးကွက်၏ကျန်ဖြစ်နိုင်သည် Android Oreo သတင်းကိုနှစ်သက်သည်.
adaptive icon များ၊ notification channel အသစ်များ၊ floating windows များသို့မဟုတ် smart စာသားရွေးချယ်ခြင်းများကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များဖြစ်လိမ့်မည် မကြာမီ OnePlus3နှင့် OnePlus 3T အပေါ်အဖြစ်မှန်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သည့်အမြန်နှုန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဒါဟာနာရီသို့မဟုတ်နေ့ကိစ္စဖြစ်သင့်သည်။
ခြော, OnePlus သည်ဤဖုန်းနှစ်မျိုးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Android Oreo သည်သူတို့ရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ပါ အန်းဒရွိုက် P ကို။ သူတို့ကဆက်လက်ထောက်ခံမှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ပေမယ့်။ အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ကြီးမားသောအရေးပါမှု၏ခဏ။ OnePlus3or 3T ရှိလား။ အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုသင်ရရှိပြီလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » OnePlus3နှင့် 3T တို့သည် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်